Waxaad go'aan ka weyn si ay u tagaan la TiVo ah digital video taariikhqorihii iyo in ay qayb ka mid ah nidaamka madadaalada guriga sameeyo. Hadda waxaad haysataa doonaa xor u yahay inuu daawado barnaamijyada ka tiro balaadhan oo ah ilo. Ma ogtahay cajalado sameeyey aad TiVo sidoo kale waxaa laga arki karaa in qolalka kale ee guriga? Waa run! Thanks to Mini TiVo ah, ee aad u awoodo. Ilaa set wuxuu qaataa labo ka mid ah koorsooyinka kala duwan oo ku xidhan nooca TiVo aad leedahay iyo sida aad u helayso signalka TV aad. Bal aynu eegno talaabooyinkan si faahfaahsan.
Marka hore, waa maxay TiVo Mini? Waa qalab yar oo aad ku xidhan karto in aad shabakadda TiVo kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato, yara, iyo dib u socon TV live, sida aad ugu weyn TiVo DVR. Sidoo kale si degdeg ah weeraryahanka Waxaad dib u socon muujinaya diiwaan isticmaalaya Mini ay samayn karaan iyo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si uu u daawado barnaamijyada aad internet geeyo, calan kor u cajalado oo ay ku jiraan xilli-dheer cajalado, caleenta iyada oo xiriir TiVo, iyo ku dhameysan daawashada show aad bilowday in ay daawadaan qol kale. Fog ayaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo Mini jiraa caadiga fog TiVo.
Marka aad unpacked sanduuqan u yar balse xoog badan, waxaad bilaabi kartaa habka Mudanayaasha. Sida aad sanduuq kasta xirmaan, hubiyo in uu ka diiwaan gashan nidaamka TiVo si heli karaan calaamadaha midig. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa internetka ama adigoo wacaya TiVo si aad u dhaqaajiso.
1. Haddii aad leedahay TiVo cusub, Roamio ah, u gudub talaabo 2. Si loo sameeyo aasaasiga ah a dhigay ilaa aad Mini on TiVo jilitaankii ah, waxaad u baahan doontaa inuu ku soo bilowdo doorataa "ogolow Live TV on Qalabka Kale" ee ugu weyn ee aad TiVo . Halkan waxa aad ka sii dayn kartaa TiVo ogaado sida badan tuners waxaa filan waa in la wadaago. Waxaad wadaagi kartaa hal ama labo tuners, sidaas ugu muhiimsan ee aad TiVo weli u qoraan kartaa ilaa laba muujinaya kale isku mar. Waxaad u leeyihiin in ay doortaan tuners kale si ay u wadaagaan sida mar dambe ma ay noqon doonaan si ay u qoraan muujinaya on sanduuqa ugu weyn TiVo awoodaan. Marka aad samaysay in, u gudub talaabo 3.
2. Roamio, hore ayaa loo sameeyay inay la wadaagto qalab kale oo mahad qoondeynta awood Mishiinkan tuner. Waxaad dooran kartaa halkan ka in ay sidoo kale ku xidhi aad Mini in ay internet-ka oo ay xiriir ah banki ama ethernet badan daga (Warbaahinta ka badan daga Alliance ama MoCA) la xidhiidha. Haddii aad leedahay bixiyaha internet ee fibre optic, waxaa jira fursad wanaagsan in aad leedahay habka dhigay ilaa la MoCA horeba. Taas ka dibna sida kaliya ee aad ku xidhan karto noqon doonaa. Sida aad arki karto sawirka ee dambe ee Mini ah, waxaa jira dad badan dekedaha leh oo ay ku xidhmaan. Qaar ka mid ah dekadaha waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xiro aad Mini in TV-ga, halka qaar kalena ku siinayaa fursado ku xidhiidhinaya shabakada.
3. Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u xidhi aad Mini in ay internet-ka. Haddii aad isticmaalayso dekeda adag-banki Ethernet (Jack in weyn oo ah in u muuqataa badan sida Jack phone a), waxa ay u fududahay in ay ku xidhmaan aad Mini. Just furaysto ee mini in ay TV adigoo isticmaalaya cable ama qayb HDMI ah fiilooyinka iyo aad dhan dhigay. Your TiVo ugu weyn ee la xiran doonaa in ay TV oo kale. Haddii aad leedahay shabakad wireless aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan, kaliya aad u baahan tahay in aad soo dirto signalka TV in ay TV-ga via midkood ah cable HDMI ama qaar ka mid ah xiriir cable kale, ka dibna cable RF aad ka derbigii aad Mini (tani waa classic ah cable wareega ku qodobtay oo ku dhammaadka). Ma awoodi doonaan in ay si toos ah u isticmaalaan shabakad wireless sida il xiriir aad, nasiib daro in aad. Waxaad u baahan tahay si loo hubiyo in aad ku socoto in ay signal joogto ah, iyo wifi uusan wey isbed bedashaa min waqti ilaa waqti.
4. Haddii aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan network MoCA aad sababtoo ah waxaad leedahay adeeg telefishan ee fibre optic ama Roamio waa uun meel aad u fog ka router wireless, waxaad isticmaali kartaa adabtarada shabakad ee nidaamka ugu weyn in markaas ka jeedsaday aad cable RF galay shabakad gurigaaga. Waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan adabtarada MoCA in ay modem cable ah iyo Jack cable ee qolka weyn ee, ka dibna labada modem iyo adabtarada u baahan tahay si ay u tagaan router ah. Markaas kaliya waxaad ku shuban kartaa Mini ku galay Jack cable qolka kaabayaal ah oo ku xirmaan TV-ga sidii hore si ay u isticmaalaan nidaamka TiVo ah.
Marka aad tahay oo dhan dhammeeyey, aad network eegi doonaa wax sidan oo kale, haddii aad qabto jilitaankii TiVo ah.
Iyadoo Roamio ah, sanduuqa Stream yahay (sida caadiga ah) mar dambe lagama maarmaan ah si ay u awoodaan in ay ka mid qalab wireless aad ee shabakadda. Waxaa la iman sanduuqa ugu weyn ee qalabka Pro oo Plus on. Saldhig model heer-galo ayaa weli u baahan doontaa sanduuqa Stream ka.
5. Haddii aad rabto in aad si ay u helaan tusmada premium sida channels movie bixisay ama aad rabto in aad si dhab ah mid ka mid ah barnaamij wareejiyo box kale, waxaad samaysan karta Roamio kale mid ka mid ah qolalka halkii Mini ah. Your xiriir dhigay ilaa la mid ah sida la Mini noqon doonaa, oo keliya la sanduuq oo kala duwan halkii. On TiVo aad rabto in aad daawato, dooro My muujinaysaa, ka dibna dooro unit TiVo aad rabto in aad show ka hesho.
Press dooro, oo markaas ka heli show aad rabto. Waxaad markaas daawan kartaa show ama wareejiyo barnaamijka. Fadlan la soco in muujinaya qaar ka mid ah awoodin in la baddali doono maadaama ay leedahay xadaynta liisan ah.
Haddaba sidaas daraaddeed su'aashu waxay tahay, sida badan Minis waxaan qotomiyey karaa? Iyadoo sanduuqyada Roamio TiVo, waxaad samaysan karta tiro kasta oo ka mid ah. Yeelan doontaa in ay sii qulquli TV internetka ee qolka kasta oo aad rabto in aad - Xafiiska, qol jiif ah, qolka Hanafiga, iyo xataa musqusha haddii aad rabto. Waa in aad ogaataa - Mini kasta oo aad u baahan tahay ay ku iibsadaan iyo waxay u baahan tahay kharash ah Times oo kala duwan, inkastoo lacagtaas waa ka yar yahay qiimaha buuxa ee TiVo ugu weyn (sida caadiga ah $ 6).
Laakiin marka aad leedahay Minis ka taagay, waxaad la Yaabteen doonaa sida aad weligii iyaga oo aan.
Sida loo abuuro Meme ah
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli TiVo in TV kale